ZESA Update On Restoration Of Power Supply
The Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA) has said it has restored the three units that had been taken out of service at Kariba South Hydro Power Station.
The development comes as the country has been facing acute load shedding attributed to faults at the country’s major power generators. Pindula News presents the statement issued by ZESA on the development:
Magetsi arikunetsaa hooooo Inga muri pama one ..... Kwandiri azeree
Masvingo 6 months ago
Tazviona mhani, abva aenda kuno 🙏. Tanga totonetseka kuti nhasi zvadii 😆😆
Gda 6 months ago
Same here in Gwanda,it's 3 days now
ZESA CEO 6 months ago
Vana Gokwe neChiredzi kumaruzevha uko zvese neChitown it's peri urban munoadii magetsi hamuna zera nawo
Gokwe Village Head 6 months ago
Gsza 6 months ago
Takaendesa 6 months ago
Please kuno ku Westgate tave kuto pinda mu2nd week tisina magetsi.
Vamwe vanorwa vanetseka nepe kuisa mishonga yavo inoda refrigeration .Zvana nyama zvimwe zvakawora.
Totokunamatayi here kuti mutipewo magetsi
Nonsense theres no Zesa in Chitown 9hrs load shedding.
Imi tiirei mushe Gokwe nanhasi kubva nezuro no Zesa
Even Nyazura as of Nezuro🔥🔥
ALEX_MARS 6 months ago
Chero kuno kuChiredzi North magetsi hakuna ...